Turjumaad sax ah oo deg dega ka yimid kuna socda 71 luqadood • CE översättningsbyrå
Turjumaad sax ah oo deg dega ka yimid kuna socda 71 luqadood
U doorasahada wakaalad xirfad turjumaad oo la isku halayn karo leh turjumaada warqadahaaga waa go’aan muhiima. Anagu CE waxaanu fahamsanahay muhimida ku xidhiidhka fariintaada si cad oo la hubo. Anagoo haysana caawimada koox turjubaano ah oo dedaal leh takhasus leh, waxaanu caawinaa shirkadaha, ururada, wakaaladaha iyo dadka doonaya in laga turjumo oo loo turjumo 71 luqadood. 10% qiima dhimista macaamiisha cusub!
Turjumaano xirfad u leh luqaday u dhasheen
Wakaalada fiican ee turjumaada, furaha guushu waa tayada turjubaanadeeda. Turjumaanadayadu had iyo jeer waa khabiiro xirfad ahaan u leh luqada oo u dhashay luqada loo turjumayo. Waxaa loo doortaa asalka khibradooda iyo khibrada qayba kala duwan oo ay ku takhasuseen. Habkayaga dalabka xulashadu wuxuu hubaa in adeega aanu samaynaa uu noqdo siddaad la rabtay rajadaada.
Qaar macaamiisha aanu la shaqaynay sanado badan
qiima dhimis ah macaamiisha cusub
kalsoonida iyo qarsoodiga
qancinta macaamiisha oo la damaana qaaday
wakaalad turjmaada ah
Ujeedadayadu waa in aanu noqono doorashadaada shuraakadaada turjumida
Shirkada kama dambaystii noqotay CE waxa la aasaasay 1999 leh ujeedo ay deg deg ku bixinayso, turjumaad la isku halayn karo oo si fudud loo heli karo. Hal ku dhega wakaaladayada turjumaadu waa in aanu bixino turjumaad aad u tayo saraysa oo leh isbedel buuxa oo degdega. Waxaan ognahay sidda wakhtigu muhiim ugu yahay ganacsiga;daahid dhowr miridh oo keliya ayaa keeni karta cawaaqib xun. CE siddaas awgeed waxay balan ku qaadaysaa in ay kugu siiso turjumaad aad u wanaagsan wakhti buura ah iyo qiime macquul ah.
Iyaddoo CE ay tahay shuraakadaada turjumaada, waa in aanad ka wer werin wakhtiga la soo dirayo, tayada, ama bixinta lacagta. Anagoon ku soo rogin macaamiishayada xukun adag, waraaqo, wakhti lumin, ama qiime xad dhaafa.
Waxaanu si is deba jooga ugu dedaalaynaaa tayo aad u saraysa. Waxaanu ula qabsanay mashruuc kasta baahida shakhsiga macmiilka ah. Dareenkayaga xoogan ee luqada iyo tayadu, oo aan ku ladhayno adeegayada macmiilka aadka u fiican, waxay naga dhigtaa doorashada ugu fiican ee dhamaan baahidaada turjumaadeed.
Markaad nala shaqayso, waxaad hubi kartaa helitaanka turjumaad sax ah oo buuxda, oo la soo diro ka hor wakhtigaad qabsatay, oo ay la socota kharashka la isku raacay. Waxaan damaana qaadaynaa in aad 100% aad ku qanci doonto mashruuc kastoo ood gacan geliso si in aanu dhamayno.
Waxay u fududahay sidda 1-2-3!
BUUXI FOOMKA DHANKA MIDIG OO NOO SOO DIR
WAXAAD HELI DOONTAA QIIME SHEEG LACAG LA’AANA IYO TAARIIKHDA LA SOO DIRAYO
HAWSHA WAANU FULIN OO WAKHTIGA LOOGU TALO GALAY BAANU KU SOO DIRI
Qiime sheeg lacag la’aana